अमेरिकामा तेलकाे मुल्य शुन्य भन्दा तल | eAdarsha.com
अमेरिकामा तेलकाे मुल्य शुन्य भन्दा तल
अमेरिकी तेलको मूल्य सोमबार इतिहासमै पहिलो पटक नकारात्मक भयो।
बजारमा अनावश्यक तेलको उत्पादनले वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) अमेरिकी तेलको बेन्चमार्क मूल्य लगभग -४० डलर प्रति ब्यारेलसम्म झर्याे ।
नकारात्मक मुल्यकाे मतलब के हाे?
यसकाे मतलब तेल उत्पादकहरूले आफ्नाे भण्डारण सुविधाहरू भरिएका कारण खरीदारहरूकर्ताहरूलाइ भुक्तान गरिरहेका छन्। जसअनुरूप सोमबार सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा पुग्दा तेल उत्पादक कम्पनीले तेल लिने कम्पनीलाइ उल्टाे ४० डलर प्रति व्यारेल तिरेकाे छ।
किन अन्य मुलुकमा तेलकाे मुल्य शुन्य भन्दा माथि छ?
विश्वमा अत्यधिक तेलको मारमा अमेरिका बढी छ, जसले दिनहुँ १० करोड ब्यारेल तेल उत्पादन गर्दछ, किनकि तेल भण्डारण भरिएको छ, तेल कम्पनीहरू तेल बेच्न व्याकुल छन्।
युके लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा तेलको मूल्यहरू अझै पनि शुन्यभन्दा माथि छ किनकि उनीहरू कम यातायात लागतहरू र बन्दरगाहहरूमा सहज पहुँचका साथ छन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क तेल, ब्रेन्ट क्रूड, को मूल्य २० डलर प्रति ब्यारेल भन्दा माथि छ।
तेल उत्पादन बन्द गर्दा के हुन्छ?
तेलकाे उत्पादन बन्द गर्नु भनेकाे तेलकाे इनार बन्द गर्नु हाे । तेलकाे इनार बन्द गर्नु साह्रै महङ्गाे हुन्छ। तेल उत्पादकलाइ तेलकाे इनार बन्द गर्नुभन्दा तेल लिनेलाइ पैसा तिर्दा सस्ताे पर्छ।
तर जारी संकट लम्बिने र अतिरिक्त तेल भण्डार गर्ने ठाँउ नहुँदा धेरै तेल उत्पादकहरूले उत्पादन बन्द गर्न थालिसकेका छन् ।